कथा : बसभित्रको पिरती « Janata Samachar
कथा : बसभित्रको पिरती
उनीहरूको चर्तिकला देखेपछि मैले मनमनै नाम राखिदिएँ, उसको नाम सुन्दर र उनको नाम चञ्चला । सुन्दरले उसकै अगाडि उभिएर बसको डण्डीमा समातेकी चञ्चलाको हातै नजिक आफ्नो हात लग्यो र सुस्तरी औंला चाल्यो । बस यस्सो घचक्क के भएको थियो चञ्चलाको हातैमाथि हात राख्यो, त्यसपछि झिकेन ।
जमाना खराब छन् अब झगडा हुने भयो भन्ने लागेको थियो, ए..बरै, चञ्चलाले त कुनै प्रतिवाद नै गरिनन्, र सुन्दरले हातले जे गर्न खोजेको हो सबै गर्यो। स्पर्श मैथुन ।
त्यो पनि लघु स्पर्श मैथुन । हातको कुनै भाषा हुन्छ भने त्यो भाषामा उसले चञ्चलासँग धेरै कुरा ग¥यो, चञ्चलाले त्यो कुरो बुझिन् । अनि मात्र चञ्चलाले पुर्लुक्क उसको मुखमा हेरिन् ।
उनले सुन्दरको मुखमा हेर्दा उसले नजानेको जस्तो गरेर अन्यत्र आँखा डुलायो । त्यसपछि चञ्चलाले हातकै स्पर्शले अर्को चिठी पठाइन् क्यार ? अनि त के चाहियो र ? सुन्दरको पेस्की बिल
फस्र्यौट भयो । दुवैका आँखा जुधे । चञ्चलाको अनुहार रातो र पिरो भयो । सुन्दरले अर्को हातले निधारका पसिना पुछ््यो । बस दगुरेकै थियो । यात्रा लामो थिएन । बस नारायणघाटबाट बुटवलको लागि छुटेको हो लोकलै त भन्नु पर्यो ।
बस कावासोती पुग्दा सुन्दर आफू उभिएको स्थानभन्दा थोरै पछाडि सर्यो। उभिएका यात्री पछाडिसम्म नै थिए । ऊ अलि पछाडि गएर उभिनुको कारण कुनै सीट खालि हुन्छन् भन्ने लागेर होइन । उसले हुन सक्छ अझ एकान्त खोज्यो । त्यो कुरो त्यति बेला थाहा भयो जब चञ्चला पनि पछाडि सर्कँदै गइन् ।
त्यहाँकोपोजिसन पहिलेको भन्दा फरक देखियो । पहिले सुन्दरले हात माथि हात मात्र राखेको थियो । पछाडि सरेपछि अझै टाँस्सियो ।
चञ्चलाले आफ्नो शरीर उसको अनुकूल बनाएको देखिन्थ्यो । सबै यात्री आफ्नै गन्तव्यको धुनमा रहेको हुनाले ती कुरामा कसैको पनि ध्यान गएन ।
ध्यान त मेरो पनि नजानु पर्ने हो तर अघिल्लो दृश्य मेरै आँखाको सामुन्ने भएको हुनाले चासो बढेको हो । त्यस ठाउँभन्दा ३० किलोमिटर जति पर पुग्दा बसमा एउटा सीट खाली भयो । सीट उनीहरू उभिएको स्थानको नजिकै थियो तर दुवैजना बसेनन् ।
उनीहरूको लभ फसिसकेको रहेछ, पछाडि सरे पछि पनि हातको अवस्था उस्तै छ । न तल परेको हात निस्कन्छ न त माथिको हात नै सर्कन्छ । त्यो बसमा उभिएका यात्रुको पनि टन्न लाइन थियो । यात्रामा थपिने अरु कसैले त्यो लिला देख्ने वा देखेर पनि अन्दाज गर्ने खालको थिएन । मैले त तमासा मात्र हेरेँ ।
मेरो सँगै सीटमा बसेकी महिला म बस्नुभन्दा पहिले नै बसिसकेकी थिइन् । उमेर त्यस्तै तीसकै हाराहारीकी । उनको र मेरो न बोलचाल भएको छ, न अरु हाउभाउ छ आपसमा न त देखादेख भएको छ ।
मेरी श्रीमती र सानी छोरी म भन्दा अघिल्लो सीटमा बसेका छन् । हामीहरू हुन त सँगै बस्न खोजेका हाँंै, सुरुमा मेरो लागि सीट पाइएन । पछि ती महिलाको कोख्खैमा परेँ ।
यसो किन भन्नु पर्यो भने मेरो बसाइको अवस्था मेरी श्रीमतीले देखिन् भने गाडीमा त केही बोल्दिनन्, घरमा पुगेपछि “धरोधर्म मैले ती महिलालाई छोएकैछैन” भनेर कसम खानुपर्छ ।
आज त तेत्तीसकोटी देवताको नाम लिँदा समेत कसमले पूर्णता नपाउला जस्तो छ । तै श्रीमतीको नजर अझै म माथि पुगेको छैन । मेरो छेउकी महिला पनि राम्री छन् भन्ने लाग्छ । अनुहारै नदेखे पनि सुन्दरताको छनक पाइएको छ ।
उनी नराम्री, केटाकेटी अथवा पाकी महिला हुन्थिन् भने मेरो यात्रा श्रीमतीको नजरमा भय रहित हुन्थ्यो । अन्यथा मेरी श्रीमती त रिसले रगतै उम्लने खालकी हुन् । उनी नभएको यात्रामा त सँगै को थियो भनेर सोध्ने बानी छ । कहिले त मैले पनि उनको तमासा हेर्न भन्ने गर्छु, “असाध्यै राम्री सुन्दरी थिइन् ।” भन्न त भन्छु तर आफैले सँभाल्नु पर्छ पछि ।
त्यसैले पनि म सतर्क भएर बसेँ । बसले ब्रेक हानेको बेला उनको कुमसँग मेरो कुम ठोकिँदा पनि म डराउँथेँ । डर ती महिलासँग त अलिकति हो, त्यो भन्दा पनि मेरै श्रीमतीसँग बढी डर ।
त्यो यात्रामा गैँडाकोटबाट एक जना यात्रु बसमा चढ्यो । ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै उसले चम्किला आँखाबाट सरर बैँसको उज्यालो फाल्यो ।
लगभग सबै यात्रीका आँखामा उसका आँखाका किरण पुगे । त्यसपछि उसले ती किरण महिलाहरूतिर छानेर फाल्यो । महिलामा पनि युवतीतिर र युवतीमा पनि अलि राम्री मानेका युवतीतिर फाल्यो ।
राम्रीको परिभाषा मैले भन्दा उसैले धेरै पढेको हो कि ? यस्तो पनि लागेको हो । बस्ने सीट थिएन र ऊ भीडमा कोच्चिँदै बीचमा पुग्यो । उसले फालेको किरण कतै गएर ठोकियो । रिचार्ज भयो भन्ने पनि लाग्छ । त्यहीँबाट सुरु भएको यो कथा हो ।
चञ्चला नारायणघाटबाटै चढेकी भए पनि सीट पाएकी थिइनन् । उनी कहाँ पुग्ने यात्री हुन् र सुन्दर कहाँ पुग्ने हो ? त्यो त थाहा भएन तर यात्राको स्वरुप हेर्दा चोरमारा भन्दा पश्चिम लाग्ने खालका दुवै होइनन् भन्ने मेरो अन्दाज फेल खायो ।
उनीहरू चोरमारा झरेनन् । कण्डक्टरले भाडा उठाउँदै थियो । कसले कहाँसम्मको भाडा दिए त्यो थाहा भएन । दुम्कीबास पुग्दा मेरै सीटको बराबरीको बी साइडमा दुईटा सीट एकैचोटी खाली भए । सुन्दर र चञ्चलाको मुखले बोलचाल भएको थिएन र पनि उनीहरू त्यो खाली सीटमा सँगै बसे ।
म आफ्नै सीटमा पनि मानौं मेरै भाइ बुहारीसँग जस्तै गरेर नछोएइकन बसेको थिएँ । जानेर वा बसाइ सजिलो पार्न पनि ती महिलासँग छोइएको थिइन । एक पटक यसो अनुहार हेर्न खोजेको त थिएँ, अघिल्लो सीटमा आमाको काखमा बसेकी छोरीले मतिर हेरेर “बाबा” भनेको सुनेपछि मेरो सातो गयो । कतै छोरीले देखेर आमासँग कुरा त लगाउने त होइन ? तर छोरीले मेरो मुखमा हेरेर मुसुक्क हाँसी मात्र ।
हुुँंइकिएको बस दाउन्नेमा पुगेर एकैछिन रोकियो । यात्राको नियमले भात खाने बेला भएको थियो । नखाइकन आएका यात्री खाने धन्दामा लागे । हामी खाएकाहरू पनि चिया खान झ¥याँै । त्यसै मौकामा मैले ती मेरै सीटको कोख्खैमा बसेकी महिलाको मुखमा के हेरेको थिएँ, बिचरा…, मेरै माइलाबाकी छोरी । बहिनी । उनीहरू चितवनमा बस्ने, म बुटवलमा बस्ने ।
धेरै समयपछि देखिएको अनुहार । कहिलेकाहीँ भेट भएको बेलामा टेढा आँखाले हेर्दा त चिन्नै गाह्रो । अहिले त बहिनीले पनि चिनिन् । मैले त उनले भन्दा पहिले अनुहार देखेको हुनाले चिनेँ । के भन्ने ? कस्सो मनमा पाप पसेन भन्ने पनि लाग्यो । तर त्यो यात्रामा मेरी श्रीमती नभएको भए सुुरुमै उनको अनुहारमा हेरिन्थ्यो होला र बहिनीसँग गफ गर्दै आइन्थ्यो । र मैले उनकी भाउजूलाई परिचय गराउन चाहेको थिएँ । छोरीले बाथरुम जान्छु भनेकीले उनी उतै लागिन् । उनी
फर्कँदासम्म बस छुट्ने बेला भएकोले मैले बहिनीसँग परिचय गराउन पाएको थिइन । सुन्दर र चञ्चलाका गफ सुस्तरी चल्न थाले । सुन्दरले चञ्चलाको घर सोध्यो, उनले चोरमारा हो भनिन् । घरको हालखबर सोध्यो ।
पढाई सोध्यो, दाजुभाइ सोध्यो, दिदीबहिनी कति छन् सोध्यो । चञ्चलाले सबै बताइन् । उसले चञ्चलालाई किन चोरमारा नझरेको हो त भनेर पनि सोधेको हो तर उनले त्यसको जवाफ दिन आवश्यक ठानिनन् वा के भयो, बोलिनन् ।
उनीहरू लगभग विवाहित जोडी जस्तै गरेर कुरा गरे । सुन्दरले उसको घर पनि बतायो । ऊ त झन कावासोतीको रहेछ । शायद बसको भाडा बुटवलसम्मकै दिए । नत्र कण्डक्टर कराउँथ्यो ।
त्यो जोडीले त्यहाँ भात खाएन, घरमै खाएर आएको हुनुपर्छ । उनीहरूको व्यवहारले पहिल्यै परिचय भएका पनि होइनन्, त्यस्तो लक्षण देखा परेन । चिया सिया केही पनि खाएनन् ।
बरु बसबाट झरेर सडकै छेउको मन्दिर नजिक पुगे जहाँ एकजना मान्छे पण्डितको पहिरनमा बसेका थिए । उनीसँग के–के कुरा गरे । पण्डितले हँसिलो मुहारले टाउको हल्लाए । त्यसपछि सुन्दर र चञ्चलाले दुईटा माला किने । अरु खित्री मित्री पनि किनेको देखियो ।
मलाई लाग्यो, चुरा, पोते, टीका र यस्तै अरु कुरा किने जुन कुराले एउटा लघु विवाह हुन्छ । समान लिएर पण्डितसमेत तीनै जना दाउन्ने देवीको मन्दिरतिर उकालो लागे । मैले मनमनै त्यो जोडीलाई विवाहको शुभकामना दिएँ ।
मेरो शुभकामना लाग्यो वा लागेन ? त्यो विवाह टिक्यो वा टिकेन ? अचम्म त त्यस्ता यात्रा उनीहरूका धेरै हुन्छन् होला । सबै यात्रामा त्यस्तै विवाह पो हुने हो कि ? केही मेसो पाउन सकिएन । बस दाउन्नेबाट बुटवलतर्फ छुट््यो ।
म निर्धक्कसँग बहिनीसँग कुरा गर्न थालेँ । त्यसभन्दा पहिले मैले मेरी श्रीमतीलाई बहिनी हुन् भनेर चिनाउन नपाएको हुनाले कुनै युवतीसँग गफ मार्दैछ भन्ने लागेछ श्रीमतीलाई । उनले अनुहार बिगारेर मतिर हेरिन् ।
शायद “पख घरमा गएर के हाल गराउँछु” भन्ने लागेको हुँदो हो । मैले त्यसै बेलामा बहिनी, माइलाबाकी छोरी भनेर परिचय गराएँ । उनको अनुहार सर्लक्कै फेरियो ।
उनले नन्दलाई नमस्ते गरिन् र नन्दले पनि । बस बुटवलतर्फ हुइँकियो । अर्काे जोडी पनि त्यस्तै त छैन ? मैले पनि आँखा त दौडाएको हुँ, कोही देखिएनन् ।
(जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडबाट प्रकाशित कथा संग्रह मुख्खेनीको मसान मा संग्रहित कथा )
पोखरा हिमालसँगै खुल्दै, आन्तरिक पर्यटक लोभिदै (फोटोफिचर)
बाह्य पर्यटक नआए पनि पछिल्ला दिनमा आन्तरिक पर्यटककको आगमनले यहाँका पर्यटन व्यवसायीमा थोरै आशा जगाएको
१०८ वर्षीय पिताद्वारा ८४ वर्षीय छाेराकाे चाैरासी पूजा सम्पन्न
आफूले यस्तो दृश्य पहिले नदेखेको तर आफ्ना बुवाले चौरासी पूजा गरिदिँदा निकै खुशी लागेको छोरा
स्वदेशी फूलले नै तिहारकाे माग धान्छ : फूल व्यवसायी
अधिकमासका कारण यसवर्षको तिहार झण्डै एक महिना पछाडि धकेलिएको छ ।
असल छिमेकी खोज्न तनहूँको व्यास जानू, छिमेकी चिन्न आशबहादुरलाई सोध्नू
काठमाडौं । मर्दा र पर्दाका भर छिमेकी नै हुन् । यो परम्परागत नेपाली सोंच हो
पाँच खेलाडीमा काेराेना संक्रमण पुष्टि
मैत्रिपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले टोलीलाइ अभ्यास गराइरहेका छन् ।
पवित्रा घर्ती मगर र विवेकमान राेका मगरकाे ‘चोली ढाकाले’ लोकदोहोरी सार्वजनिक (भिडियोसहित)